Ukusebenzisa i-Google Scraping Tool Ukukhipha Idatha - Uchwepheshe We-Semalt
A i-web scraper iskripthi esenzekelayo esiqoqa idatha kusuka izindawo ezigxile, okuvumela abasebenzisi bokugcina ukuba bashintshe ulwazi olutholakale kufomethi ephathekayo. Ngempela, umuntu angathola noma yiluphi ulwazi akudingayo kuwebhu. Inkinga ukukhipha idatha kumafomethi okungenziwa kalula noma ahlaziywe kalula.
Ithuluzi lokuhlunga le-Google
isandiso se-Google Chrome esilulayo ithuluzi le-web scraping elisebenza kusiphequluli se-Chrome. Ngalesi sandiso, akudingeki ukuqasha izinkulungwane zabasizi ukukopisha-unamathisele okuqukethwe kuwebhu usuku lonke. Khetha i-target-text bese uvumela isandiso se-Chrome esicacile sokwenza okunye - appraisal equipment machinery school.
Inamba enhle yamaqembu ezakhamizi asebenza ukubamba uhulumeni wabo ngokuphendula phansi-ukulandelela izindleko zabo. Isandiso se-Chrome esicacisayo sibavumela ukuba balwe ngokucacile nokuphendula ngokuqoqa idatha yangempela mayelana nokusebenza kohulumeni. Ukukopisha idatha kusuka kuwebhu usebenzisa amasu omsebenzi kungaba umsebenzi owusizo. Yenza umkhankaso wakho wokuqhafaza uphumelele ngokufaka lokhu isandiso se-web scraper kusiphequluli sakho.
Ungafaka kanjani ukufaka isandiso se-Chrome esicacile?
isandiso se-Google chrome scraper iyisithuluzi sokuhlunga sewebhu esiphezulu kakhulu esinikezwa mahhala kusitolo sewebhu se-Chrome. Ukufaka lesi siphequluli kwisiphequluli sakho, chofoza inketho ethi "Engeza ku-Chrome" eboniswe ekhoneni eliphezulu ngakwesokudla sesiphequluli sakho se-Chrome. Uma sekufakiwe, ithuluzi manje litholakala ngaphansi kwenkinobho yemenyu yesiphequluli sakho.
Indlela yokusebenzisa ithuluzi le-Google Scraping?
Amanye amatafula wedatha yewebhu angadluliselwa kuwebhu kuma-spreadsheet angasetshenziswa esikhathini esizayo. Kodwa-ke, ukuthola idatha kusuka kumawebhusayithi ahleliwe kumafomethi asetshenziswa kudinga imizamo eyengeziwe. Kulesi sifundo, amatafula we-United States Securities and Exchange Commission (2015 ifomu 20-F) azosetshenziselwa ukubonisa indlela ukukhuliswa kwe-Chrome okususa idatha kusuka kumakhasi wewebhu namasayithi.
Ukukhipha idatha kusuka kumasayithi usebenzisa ithuluzi le-Google yokuhlunga, bona ikhasi lewebhu lizoxoshwa. Kulokhu, gxila ematafuleni. Khetha imigqa okumelwe ukhonjiswe bese uchofoza isithonjana se-scraper ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesiphequluli sakho bese ukhetha "I-Scrape efanayo. "
Isandiso se-Chrome Scraper sizodlulisela idatha ekhishwe ngaphakathi efasiteleni elisha. I-scraper yakho izokhomba amagama amakholomu wetafula elikhishwe. Hlola idatha ebuyisiwe ukuze uqiniseke ukuthi ikhishwe kahle. Chofoza "Kopisha ebhodini lokunamathisela" bese uvula i-Microsoft Excel yakho. Namathisela idatha kuspredishithi sakho ngokuchofoza "Ctrl + V. "
Ngaphambi kokuba uhlaziye ulwazi kuspredishithi sakho, shiya izinhlobonhlobo zekholomu ezindaweni zazo ezifanele. Susa amakholomu angenalutho ku-Microsoft Excel yakho ukuthola idatha yangempela. Sebenzisa umsebenzi we-Excel ukuze uqinisekise ukuthi inani lokukhokha eshadini lakho lilungile.
ithuluzi lokukhwa kwe-Google lenza umsebenzi wokuqoqa idatha ube lula kakhulu futhi uqondisise kakhulu. I-Scraper ikhulisa ukuchithwa kwedatha ye-web kanye nokusebenza kahle ekunikezeni izinketho eziningi zokuhlola-ukuhlola amanani akho. Sebenzisa umhlahlandlela okhulunywe ngenhla ukuze uhlakaze uhulumeni amakhasi ewebhu bese uthola idatha yangempela yokubonakala.